Gabadh dhiigga caadada ceeb looga dhigay oo isdishay - BBC News Somali
Gabadh dhiigga caadada ceeb looga dhigay oo isdishay
Image caption Gabdho badan oo ku nool waddamada saxaraha ka hooseeya ma awoodaan inay iibsadaan agabka caadada
Gabadh iskuuley ah oo u dhalatay dalka Kenya ayaa isdishay ka dib markii sida la sheegay ceeb looga dhigay inuu ku dhacay dhiigga caadada, dharka iskuulkana uu uga hallaabay.
Hooyada dhashay gabadha 14 kirka ahayd ayaa sheegtay in gabadheeda ay isdaldashay ka dib markii uu si xun u bahdilay acallinkeeda, sida ay maanta shaaciyeen warbaahinta dalka Kenya.
Ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday inay kala eryaan qiyaastii 200 oo waalidiin ah oo mudaharaad ku sameeyay bannaanka hore ee Iskuulka ay gabadha dhimatay dhiganeysay.
Kenya ayaa sanadkii 2017-kii meel marisay sharci dhigaya in gabadha iskuulleyda ah fasalladooda loogu geeyo agabka loo isticmaalo in la isaga nadiifiyo dhiigga caadada.
Gabar in dharkeedu caado leeyahay fasalka looga saary oo is dishay
Maxay dumarkan wejiga u marsadeen dhiigga caadada?
Hase yeeshee, guddi ka tirsan baarlamaanka ayaa hadda baaraya sababta ilaa hadda aan adeeggaas muhiimka ah loo wada gaarsiinin iskuullada dalka oo dhan.
Hooyada gabadheeda ay isdishay ayaa sheegtay in Jimcadii uu macallinkeeda ugu yeeray "wasakh" maadaama ay ciid iska marisay meelihii uu dhiigga uga hallaabay, wuxuuna ka saaray fasalka ay ka dhiganeysay iskuul ku yaalla deegaanka Kabiangek oo dhinaca galbeed ka xiga caasimadda Nairobi.
"Ma aysan heysanin agabka caadada loo isticmaalo. markii uu dhiigga uga hallaabay dharkana, waxaa lagu amray inay ka baxdo fasalka oo ay bannaanka istaagto", sidaas ayey hooyada ku tiri warbaahinta Kenya.
Image caption Dalal kale ayaa laga soo tabiyay dhibaatooyin ay gabadhaha ula kulmaan caadada ku dhacday awgeed, sida Hindiya
Waxay intaas ku dartay in gabadheeda markii ay guriga timid ah ay uga sheekeysay wixii dhacay, laakiin cabbaar ka dib markii ay biyo aroor aadday waxay go'aansatay inay isdisho.
Waalidiinta gabadha ayaa dhacdadan ku wargaliyay booliska, balse waxay ciil ka dareemeen in wax tallaabo ah la qaadi waayay, sida uu tabiyay wargeyska Daily Nation.
Iyagoo ay wehlinayaan waalidiin kale ayey Talaadadii dibadbax ka sameeyeen bannaanka iskuulka. Booliska ayaa xabsiga u taxaabay 5 ruux, ka dib markii ay mudaharaadeyaasha waddo isla markaana dhulka dhigeen albaabkii uu Iskuulka lahaa, sida ay wararka sheegayaan. Iskuulkaas ayaana ilaa hadda xiran.
Taliyaha booliska ee gobolka Alex Shikondi ayaa sheegay in baaritaanno lagu wado waxyaabaha ku xeeran dhimashada gabadha yar.
Maamulihii Iskuulka ay arrintan ka dhacday ayaa ka gaabsaday inuu warbaahinta la hadlo.
Kenya, sida waddamo kale oo badan, gabdho badan ayaan dhaqaale ahaan u awoodin inay soo iibsadaan agabka loo isticmaalo caadada.
Warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay sanadkii 2014-kii ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 10-kii gabdhood ee ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya ay iskuulka seegto maalmaha ay ay ku jirto caadada.
Qaar ka mid ah gabdhaha ayaa sababtan awgeed u waaya 20% ka mid ah waxbarashadooda, waxayna taas inta badan u horseeddaa inay meel dhexe uga haraan guud ahaan Iskuulka, sida lagu xusay warbixinta Qaramada Midoobay.